ပါးလွှာသောကတ်ကြေးကိုအသုံးပြုနည်း | အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများအတွက်ညှပ်ထားသောပါးလွှာသောဆံပင် - ဂျပန်ကတ်ကြေး
ပါးလွှာသောကတ်ကြေးများသည်အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးဆံပင်ပုံစံများအတွက်အလွန်အသုံးဝင်သည်။ ဤဆောင်းပါးတွင်ပါးလွှာသောကတ်ကြေးများရွှင်လန်းမှုအကြောင်းကိုကျွန်ုပ်မပြောပါ သူတို့ကိုအိမ်တွင်၊ ကျောင်း၌သို့မဟုတ်အလှပြင်ဆိုင်နှင့်ဆံပင်ညှပ်ဆိုင်များတွင်မည်သို့အသုံးပြုရမည်နည်း.
ဘယ်လိုကိုင်ရမယ်၊ အိမ်မှာပါးလွှာတဲ့ကတ်ကြေးတွေဘယ်လိုသုံးရမယ်၊။ အချိန်ဖြုန်းစရာမလိုဘဲ၊
အကောင်းဆုံးကိုရှာဖွေပါ ဒီမှာဆံပင်ကတ်ကြေးပါးလွှာခြင်းနှင့် texturizing!
အဆင့် (၁) ။
ကွဲပြားခြားနားသောကဏ္betweenများ (ရှည်လျား။ တိုတောင်းသောareasရိယာများ) အကြားသင့်ဆံပင်ကိုရောစပ်ပါ။
အကယ်၍ သင်သည်ထူထဲ။ သန်မာသောဆံပင်ကိုဖြတ်တောက်ပါကအပိုအလေးချိန်ကိုလွတ်မြောက်စေရန်ပါးလွှာသောကတ်ကြေးကိုအသုံးပြုရန်လိုအပ်သည်။ သို့သော်၊ အကယ်၍ သင်ဆံပင်သည် ပို၍ ပါးလွှာပါကဆံပင်အပိုင်းအစများကိုရောစပ်ရန်အတွက်ပါးလွှာသောကတ်ကြေးများကိုသာအသုံးပြုရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။
အဆင့် ၂ - ဘယ်လိုပါးလွှာတဲ့ကတ်ကြေးအမျိုးအစားကိုသင်အသုံးပြုနေသလဲ။
ပါးလွှာသောအံသွား ၂၄ မှ ၄၀ အထိ: texturizing နှင့်ရောစပ်
6 မှ 12 & 30 မှ 40 အထိပါးလွှာသော လေးလံသောအလေးချိန်ကိုဖယ်ရှားသောပါးလွှာ
အံသွားခြောက်မှ ၁၂ ခုအထိ: ရောနှောခြင်းနှင့်ပြီး
အဆိုပါ ပါးလွှာသော texturizing နှင့်ရောစပ် နှင့် ပါးလွှာရောစပ်ခြင်းနှင့်ပြီး ဆံပင်များပိုမိုများပြားလေ့ရှိပြီးများသောအားဖြင့်အနိမ့်ဆုံးနေရာနှင့် v-shaped အနားများရှိကာဆံပင်ကိုပိုမိုပေါ့ပါးသည့်အသွင်အပြင်နှင့်အတူတကွပေါင်းစပ်ပေးသောနေရာများတွင်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
သင့်တွင်သိပ်သည်းသောအစုအဝေးများသို့မဟုတ်ထူထပ်သောဆံပင်များရှိသည့်အခြေအနေများအတွက်၊ ပါးလွှာသောပါးစပ် ပိုမိုပေါ့ပါးသောခံစားမှုနှင့်ကြည့်ရှုနိုင်ရန်အတွက်ဆံပင်အပိုင်းအစများကိုဖယ်ရှားရာတွင်အလွန်ကောင်းမွန်သည်။
ပါးလွှာသောကတ်ကြေးအမျိုးအစား အံသွား ၂၄ ခုကျော်ရှိပြီးအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများအတွက်ဆံပင်ကိုရောစပ်ရာတွင်ကောင်းမွန်သည်။
ယင်းနှင့် ပတ်သက်. ပိုမို Read ဤနေရာတွင်ဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းကတ်ကြေးအမျိုးအစားများ!
အဆင့် ၃။ ပါးလွှာသောကတ်ကြေးများကိုမည်သို့ကိုင်တွယ်အသုံးပြုရမည်
ယခုကျွန်ုပ်တို့သည်ဆံပင်ပါးလွှာသောကတ်ကြေးအသုံးပြုနည်းနှင့်မည်သို့ကိုင်ရမည်ကိုအသေးစိတ်လေ့လာနိုင်သည်။ ငါတို့တိုတိုနှင့်ချိုမြိန်နေမည်၊ ထို့ကြောင့်သင်စတင်နိုင်သည်။
အကြောင်းပိုမို Read ဆံပင်အလှပြုပြင်သူများသည်သူတို့၏ကတ်ကြေးများကိုမည်သို့ကိုင်ထားသနည်း
အဆင့် ၃.၁ ပါးလွှာသောကတ်ကြေးများကိုမည်သို့ကိုင်ရမည်နည်း
သငျသညျကတ်ကြေးကိုင်တွယ်ရန်သင့်လျော်သောနှင့်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုရိုးရှင်းတဲ့တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤနည်းလမ်းကို Traditional Western Grip ဟုခေါ်သည်၊ ၎င်းသည်အများဆုံးနည်းတူဖြစ်သည် ဆံပင်အလှပြုပြင်သူများသည်သူတို့၏ကတ်ကြေးများကိုကိုင်ထားကြလိမ့်မည်.
အဆင့် ၃.၂ ပါးလွှာသောကတ်ကြေးအသုံးပြုနည်း
ဆံပင်ပါးလွှာသောကတ်ကြေးအသုံးပြုခြင်းသည်ဓါးသွားများကိုဖွင့်ခြင်းနှင့်ပိတ်ခြင်းကဲ့သို့လွယ်ကူသည်။ သင်သည်သင်၏လက်ညှိုးနှင့်အလယ်လက်ချောင်းကြားရှိဆံပင်အပိုင်းတစ်ပိုင်းကိုဆုပ်ကိုင်နိုင်သည်၊ ထို့နောက်သင်၏လက်ချောင်းများအောက်ရှိဆံပင်ကိုပါးလွှာနိုင်သည်။ တနည်းအားဖြင့်မင်းကဖြီးနိုင်ပြီးအံသွား၏ထိပ်ပိုင်းမှဆံပင်ကိုပါးလွှာအောင်ပြုလုပ်နိုင်သည်။
သင်ရောနှောလိုသောကဏ္ the နှစ်ခုကြားရှိလက်ညှိုးထိုး၊ အလယ်လက်ချောင်းသို့မဟုတ်ဆံပင်ကိုဖြီးပါ။
ပါးလွှာသောကတ်ကြေးကိုဖွင့ ်၍ ချောမွေ့သောလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုဖြင့်ဆံပင်နှင့်အကြားပိတ်ပါ။
ဆံပင်ညှပ်အဆုံးတွင်ဖြစ်စေ၊ အစတွင်ဖြစ်စေဆံပင်ကိုဖြောင့်စွာအောက်သို့ဖယ်ထားပါ။ အဘယ်သူမျှမထုံးသို့မဟုတ်ရှုပ်ထွေးဆံပင်ကဏ္sectionsများရှိသင့်ပါတယ်။
သင်၏အကျင့်၌ပါးလွှာသောကတ်ကြေးများကိုကိုင်ထားပါminaလက်ျာဘက်နှင့်ဓါးသွားဖွင့်လှစ်။ လက်ချောင်းများသို့မဟုတ်ဖြီးအထက်တစ်လက်မမှ ၂ လက်မခန့်ရှိသောကတ်ကြေးများကိုနေရာချပါ၊ သို့မှသာသင်ဖမ်းယူထားသည့်အပိုင်းနှင့်အနည်းငယ်ကွာဝေးနေသည်။
အဆင့် ၃.၃ အိမ်၌ပါးလွှာသောကတ်ကြေးအသုံးပြုနည်း
သင်သည်ဆံပင်ကိုထိန်းသိမ်းရန်သို့မဟုတ်အခြားသူတစ် ဦး ဦး အားဆံပင်ညှပ်ပေးလျှင်သင်အိမ်၌ပါးလွှာသောကတ်ကြေးကိုအသုံးပြုခြင်းသည်အလွန်ကောင်းသောအကြံဖြစ်သည်။
အကယ်၍ သင်သည်အစပြုသူတစ် ဦး ဖြစ်လျှင်ဆံပင်များများဖယ်ရှားခြင်းကမည်သည့်ပျက်စီးမှုကိုမဆိုပြုပြင်ရန်ခက်ခဲစေသဖြင့်သင်လိုချင်သည်ထက်လျှော့ချရန်ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုပါသည်။
အိမ်တွင်ဆံပင်ပါးလွှာစေရန်အလွယ်ဆုံးနှင့်အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းမှာသင်၏ဆံပင်ညှပ်ဆုံးအဆုံးတွင်အပိုင်းနှစ်ပိုင်းကိုပေါင်းစည်းခြင်းဖြစ်သည်။ ဒါကသင့်ကိုယ်ပိုင်ဆံပင်ကိုဖြတ်ဖို့ခက်ခဲနိုင်ပါတယ်၊ ဒါကြောင့်မှန်ကိုသုံးပြီးအိမ်မှာတစ်ယောက်ယောက်ကိုကူညီဖို့တောင်းခံပါ။
အကြောင်းပိုမို Read အိမ်တွင်ဆံပင်ညှပ်ခြင်းအတွက်အကောင်းဆုံးကတ်ကြေးများ!
အဆင့် ၃.၄ ။ အမျိုးသမီးဆံပင်ပေါ်တွင်ပါးလွှာသောကတ်ကြေးများကိုအသုံးပြုနည်း
ဆံပင်အလှပြုပြင်သူ YouTuber Dannah Rey သည်ပိုမိုရှည်လျားသောဆံပင်ပေါ်၌အလေးချိန်ကိုဖယ်ရှားရန်ပါးလွှာသောကတ်ကြေးအသုံးပြုနည်းကိုဗီဒီယိုသင်ခန်းစာပေးသည်။
အဆင့် ၃.၅ အမျိုးသားဆံပင်ပေါ်မှာပါးလွှာတဲ့ကတ်ကြေးတွေအသုံးပြုနည်း
ဆံပင်အလှပြုပြင်သည့် YouTuber Pose သည်ပိုမိုပါးလွှာသောဆံပင်ကိုမည်သို့သုံးစွဲရမည်နှင့် ပတ်သက်၍ အလွန်ရိုးရှင်းသောရှင်းလင်းချက်ကိုပေးသည်။
ပါးလွှာသောညှပ်သည်အလွန်ဘက်စုံဖြစ်ပြီးသွားပုံစံအမျိုးမျိုးဖြင့်လာသည်။ သင်ကဖောက်သည်တစ် ဦး ၏ဆံပင်၏ ၄၀ မှ ၇၀% ကြားတွင်ဖြတ်တောက်ခြင်းကို ၁ မှ ၂ ခုအထိဖြတ်နိုင်သည်။ ပါးလွှာသောကတ်ကြေးများသည်မည်သည့်ပေးထားသောဆံပင်ပုံစံတွင်မဆို ပို၍ သဘာဝအရောအနှောများကိုထည့်နိုင်သည်သို့မဟုတ်သင့်လက်ရာ၏အရသာကိုတိုးတက်စေရန် texture အဆင့်တစ်ခုကိုထည့်နိုင်သည်။
မဲလ်ဘုန်းမြို့မှာရှိတဲ့အလှပြင်ဆိုင်ပိုင်ရှင်ဇွန်လနဲ့ဆံပင်အလှပြုပြင်သူများအတွက်အကောင်းဆုံး texturising ပါးလွှာတဲ့ကတ်ကြေးတွေအကြောင်းပြောခဲ့တယ်။
သူက "ငါကကတ်ကြေးတွေဖြတ်တောက်တာထက်ချောမွေ့တဲ့ပါးလွှာတဲ့အရာတွေကိုရှာရတာဟာအမြဲတမ်းခက်ခဲတာကိုတွေ့ခဲ့ရတယ်" ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ "အရည်အသွေးကွာခြားချက်ကိုလေ့လာပြီးတဲ့နောက်ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တယ် Jaguar, Juntetsu နှင့် Yasaka Prism သွားနှင့်အရည်အသွေးမြင့်သံမဏိကြောင့်ရရှိနိုင်သည့်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်စရာအဖြစ် သင်ကဒေါ်လာ ၁၅၀ လျှော့ချတဲ့ကတ်ကြေးတစ်ချောင်းကို ၀ ယ်ပြီးသူတို့နဲ့ကျေနပ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်သင်အချောမွေ့ဆုံးဖြတ်တောက်မှုကိုလိုချင်ရင်ဒေါ်လာ ၂၀၀ + + တစ်စုံပါးလွှာမှုကိုဝယ်ချင်တယ်။ "
အကယ်၍ သင်သည်ကျွန်ုပ်တို့ site တွင်ခဏတာရှိနေခဲ့ပါကသွားအရေအတွက်အမျိုးမျိုးရှိသည့်ပါးလွှာသောကတ်ကြေးများကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။ ယေဘူယျအားဖြင့် ၂၅ နှင့်အထက်သည် texturising နှင့်ရောစပ်ရန်အတွက်ဖြစ်ပြီး ၁၅ နှင့်အောက်သည် chunk removers များဖြစ်သည်။
ဆံပင်ထူထူကိုကိုင်တွယ်တဲ့အခါပိုကျယ်ပြန့်တဲ့ကွက်လပ်တွေနဲ့သွားနည်းနည်းကမင်းရဲ့အလုပ်ကိုပိုလွယ်ကူစေတယ်။အတုံးဖယ်ထုတ်ပေးသူများသည်သာမန်ကတ်ကြေးများနှင့်ရုန်းကန်နေရသောဆံပင်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ အမည်ရှိသောကြောင့်ဤညှပ်ညှပ်ညှပ်များသည်တစ်ချိန်တည်းတွင်ဆံပင်အမြောက်အများကိုထုတ်ပစ်နိုင်သည် (~ 40 - 80%) ။ သို့သော်အရေးကြီးသောသတိပေးချက်တစ်ခုမှာ Chunk ကတ်ကြေးများကိုအသုံးပြုရန်ခက်ခဲပြီးအလွဲသုံးစားလုပ်ပါကအပေါက်များအတွင်းထားရှိနိုင်သည်။
အခုတော့ကျနော်တို့ကပါးလွှာတဲ့ညှပ်အကြောင်းကို nitty-gritty နှင့်အတူပြုကြပြီ။ သူတို့ကိုဘယ်လိုအသုံးပြုနိုင်သလဲ။
လှမ်း 1. ဆံပင်မှတဆင့် Brush / ဖြီး
၎င်းသည်ဒုံးပျံဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာမဟုတ်သော်လည်းဆံပင်ကိုနဂိုအတိုင်းချောမွေ့ပြီးချောမွေ့အောင်ပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည်။ ထို့အပြင်စိုစွတ်သောဆံပင်များအတူတကွကပ်နေခြင်းကြောင့်ခြောက်သွေ့သောဆံပင်ပေါ်၌ပါးလွှာသောကတ်ကြေးများကိုအသုံးပြုခြင်းသည်ပိုမိုကောင်းမွန်သောကြောင့်သင်ဖြတ်တောက်မှုတစ်ခုချင်းစီ၏သဟဇာတဖြစ်မှုကိုလျှော့ချနိုင်သည်။ သင်အလုပ်လုပ်နေသည့်ဆံပင်သည်သဘာဝအားဖြင့်ကောက်ကျစ်ပါက texturising shears များကိုမသုံးမီဖြောင့်အောင်လုပ်ပါ။
အဆင့် ၂။ သွားနှင့်သွားကြားကဆံပင်
သင်၏ညှပ်များကိုလက်ဖြင့်ထားပါ။ ဓါးသွားကို ခွဲ၍ ဆံပင်အနည်းငယ်နှင့်သွားနှင့်ဖြတ်ထားသောဓါးကြားတွင်ထားပါ။ သင်၏ညှပ်သည် ဦး ရေပြားနှင့်သင့်လက်ချောင်းများ၏မျက်နှာပြင်အထက်အကြမ်းအားဖြင့်သုံးလက်မခန့်ရှိသည်ကိုသေချာအောင်လုပ်ပါ။ ဖောက်သည်တစ် ဦး ဆံပင်၏အမြစ်များသို့မဟုတ်အကြံဥာဏ်များကိုဘယ်တော့မှမသုံးပါနှင့်။
အဆင့် ၃၅။ ဒီဂရီ Angle နှင့်သေးငယ်သော Snips များ
သင်၏ပါးလွှာသောညှပ်အကြားဆံပင်များပျံ့နှံ့နေသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်သင့်ရဲ့ကတ်ကြေးဓါးသွားများကိုနှာခေါင်းအတွင်းသို့ ၄၅ ဒီဂရီထောင့်ဖြင့်ကိုင်။ အပိုပမာဏအချို့ကိုဖယ်ရှားရန်သေးငယ်သောသရေစာအနည်းငယ်ပြုလုပ်ပါ။ ဆံပင်ပိုလျှံနေတဲ့ဆံပင်တစ်ချောင်းစီကိုတစ်ချောင်းစီနဲ့တစ်ချိန်တည်းဖြုတ်ပစ်ပါ။
မကြာခဏမေးလေ့ရှိတဲ့မေးခွန်းများ - ဆံပင်ပါးလွှာတဲ့ကတ်ကြေးတွေသုံးစွဲနည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမေးအဖြေများ
ပါးလွှာသောကတ်ကြေးများနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့ရရှိသောမကြာခဏမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများကိုအောက်တွင်ကြည့်ပါ။ ထို့ကြောင့်မည်သည့်မေးခွန်းမဆိုကျွန်ုပ်တို့အားဆက်သွယ်ပါရန်တွန့်ဆုတ်မနေပါနှင့်။ ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့်သင့်အတွက်အဖြေတစ်ခုရရှိပါမည်။
အချို့သောပုဂ္ဂိုလ်များသည်အရည်အသွေးရှိသောသံမဏိကိုအသုံးပြုခြင်းသည်ဖြတ်တောက်သောကတ်ကြေးကိုအသုံးပြုခြင်းထက် ပို၍ ပါးလွှာ။ စက္ကူပြုလုပ်ရာတွင်ပိုမိုလိုအပ်သည်ဟူသောထင်မြင်ချက်ကိုတိတိကျကျသတ်မှတ်ထားကြသည်။
သင်ကပိုမိုပါးလွှာသောသို့မဟုတ် texturizing ညှပ်သင့်ရဲ့ဖြတ်တောက်ခြင်းညှပ်ကဲ့သို့သလောက်မသုံးစေခြင်းငှါပေမယ့်ကတ်ကြေးအသုံးမကျစေရန်အဘို့အဒါဟာအားလုံးကျိုးသွားဖြစ်ပါတယ်။
အတွေ့အကြုံရှိသောဆံပင်ညှပ်သမားတစ် ဦး ၏လက်၌ပါးလွှာသောအကျီင်္များသည်အဆိုးဖြစ်ခြင်းနှင့်အလွန်ဝေးကွာသည်။
ပါးလွှာသောညှပ်သည်ဆံပင်ပုံစံများစွာကိုတိုးတက်စေသည်။ ထုထည်တိုး။ လေးလံသောဖြတ်တောက်ခြင်းလိုင်းများမှေးမှိန်ရန်မလိုအပ်သောအမြောက်အများကိုထုတ်ယူနိုင်သည်။
ပါးလွှာသောညှပ်များကိုလိင်နှစ်မျိုးစလုံးတွင်အသုံးပြုသည်။ အရေးကြီးဆုံးမှာဆံပင်အမျိုးအစားနှင့်လူတစ် ဦး ချင်းစီ (အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး) လိုချင်သောပုံစံဖြစ်သည်။
လျှောချခြင်း၊ ညှပ်ခြင်း၊ ထစ်ခြင်း (သို့) ပါးလွှာသောညှပ်များကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သောဝေါဟာရအချို့ဖြစ်သည်။ Point ဖြတ်ခြင်းဆိုသည်မှာညှပ်များကိုသင်၏ဆံပင်ကိုညှပ်ရန်ဆံပင်သို့ညှပ်လိုက်သောအခါဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ပျော့ပျောင်းသောအလွှာများကိုဖွဲ့စည်းရန်နှင့်ဆံပင်ကောက်ကောက်ကိုနူးညံ့ချောမွေ့စေရန်အတွက်အသုံးပြုသည်။
ထုသည် point ဖြတ်ခြင်းနှင့်ပိုတူသည်၊ တစ်ခုတည်းသောခြားနားချက်မှာဆံပင်တိုများတွင်အသုံးပြုခြင်းဖြစ်သည်။ ဤနည်းအတွက်သင့်တော်သောအကောင်းဆုံးဖြတ်တောက်မှုအမျိုးအစားများသည် pixie ဖြတ်တောက်ခြင်းသို့မဟုတ်အမျိုးသားဖြတ်တောက်ခြင်းများဖြစ်သည်။ ဒါဟာဆံပင်အများကြီးအရောင်အဆင်းပေးသည်။
သင်ဆံပင်ကိုသရဖူ / halo fromရိယာမှစပြီးမစသင့်ဘဲဆံပင်ကိုဒေါင်လိုက်အနေအထားရှိသည့်နေရာတွင်ဆန့ ်၍ ဆံပင်ညှပ်နေသည်ကိုမတွေ့ပါက ထပ်မံ၍ မပြုလုပ်သင့်ပါ။
ဖြည်းဖြည်းပြုလုပ်ပါ။ ထို့နောက်မည်မျှဖယ်ရှားပစ်သည်ကိုသိရှိရန်ဆံပင်ချွတ်ယွင်းမှုကိုဖယ်ရှားခြင်းဖြင့်သင်၏တိုးတက်မှုကိုစစ်ဆေးပါ။ ၎င်းသည်ဖြတ်တောက်မှုများစွာပြုလုပ်နိုင်သော်လည်းအခြားတစ်ဖက်သို့သွားရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။
ဆံပင်ညှပ်ဆံပင်များအကြားကြီးထွားလာခြင်းနှင့်အပိုအလေးချိန်ကထူလာစေသည့်အခါသို့သော်ထူ၏ဖြစ်စဉ်ကိုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ပါးလွှာခြင်းဟာဆံပင်ထူလာခြင်း (သို့) ဆံပင်ရဲ့ပမာဏကိုတိုးမြှင့်ခြင်းမရှိခြင်း၊
အဘယ်အရာကပါးလွှာသောညှပ်များကို texturizing shear များနှင့်ခြားနားသနည်း။
အပျော်တမ်းဆံပင်ညှပ်သမားတစ် ဦး သည်သူတို့၏ကြောက်စရာသွားများကြောင့်ပါးလွှာသောအံကပ်များနှင့်အထည်များညှပ်ထားခြင်းကိုအလွယ်တကူရောစပ်နိုင်သည်။
ပါးလွှာပြီးစက္ကူဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောပစ္စည်းများသည်ဆံပင်ကိုဖယ်ရှားပေးသော်လည်း၊ ၎င်းတို့တွင်ထူးခြားသောအလုပ်များရှိသည်။ client ကိုအကောင်းဆုံးရလဒ်ပေးဖို့ဘယ်ကတ်ကြေးကိုသုံးရမယ်ဆိုတာနှစ်ခုလုံးရဲ့ကွာခြားချက်ကိုသိဖို့အရေးကြီးတယ်။
ပါးလွှာသောညှပ်များတွင်အံသွား ၂၈ မှ ၄၀ ခန့်ရှိပြီးဆံပင်မှကိုယ်အလေးချိန်ကိုလျှော့ချရန်နှင့်ဖြတ်တောက်သောကတ်ကြေးများကျန်ရှိနေသောနယ်နိမိတ်မျဉ်းများကိုရောနှောရန်ရည်ရွယ်သည်။
သူတို့ကဆံပင်ကိုမြင်နိုင်တဲ့ texture နဲ့ volume ကိုမပေးပါဘူး။ ၎င်းသည်ဆံပင်ညှပ်မှပျော့ပျောင်းစေရန်နှင့်ဖယ်ရှားရန်အများဆုံးဖြစ်သည်။
Texturizing shear များသည်သေးငယ်သော်လည်းအနည်းငယ်ကျယ်သောသွားများရှိသည်။ ထို့ကြောင့်သူတို့၏ဆံပင်များအကြားနေရာလွတ်များပိုများသည်။
အဲဒီမှာ texturizing ညှပ်အမျိုးအစားနှစ်မျိုး - ရန်လိုသောနှင့်သိမ်မွေ့သော။ ဆိုးရွားသောထုထည်ကိုဖယ်ရှားနိုင်ရန်အတွက်အသားညှပ်။ ညှပ်ထားသည့်သွားညှစ်ခြင်းတွင်သွား ၅ ခုမျှသာရှိသည်။
ပါးလွှာသောပစ္စည်းများနှင့် texturizing ညှပ်များကိုထူးခြားသောရုပ်ပုံများဖန်တီးရန်အသုံးပြုသည်။
အကောင်းဆုံးဂျပန်စတိုင်ပါးလွှာသောကတ်ကြေးများ ဤနေရာတွင် JapanScissors.com.au တွင်ဖတ်ပါ
၀ ယ်သူ၏ဝယ်သူလမ်းညွှန် | ဤနေရာတွင် ScissorHub.com.au တွင်ဖတ်ပါ
အမေရိကန်ဆံပင်ညှပ်ဆိုင်သို့မဟုတ်အလှပြင်ဆိုင်တွင်ဆံပင်ပါးလွှာသည့်ကတ်ကြေးအသုံးပြုနည်း | ဤနေရာတွင် JPscissors.com မှာဖတ်ပါ
ပါးလွှာသောကတ်ကြေးဖြင့်ဆံပင်ပုံသဏ္Developmentာန်ပြောင်းလဲမှု | DBPia.co.kr တွင်ဤနေရာတွင်ဖတ်ပါ
ပါးလွှာသောကတ်ကြေး၏အကျိုးသက်ရောက်မှု | IOPScience.iop.org တွင်ဤနေရာတွင်ဖတ်ပါ
Rock and Roll အဘိုးအို
စက်တင်ဘာလ 01, 2021
အိမ်မှာဆံပင်ညှပ်တာကြိုက်တဲ့သူတချို့ကိုငါသိတယ်၊ ဒါပေမယ့်သူတို့ကဆံပင်ပါးလွှာတဲ့ကတ်ကြေးကိုသုံးတာသူတို့အတွက်အသုံးဝင်မှန်းငါမသိခဲ့ဘူး။ ဒါဟာနေ့စဉ် Joe ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုထက်ကျော်လွန်လိမ့်မယ်လို့ငါထင်ခဲ့တယ်။ ဒီဗီဒီယိုကိုတင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဗွီဒီယိုကိုကြည့်တဲ့သူအချို့ကဆံပင်ဖြတ်တဲ့ကတ်ကြေးကိုဆံပင်ဖြတ်တဲ့ကတ်ကြေးတစ်စုံနဲ့ထည့်နိုင်မယ်ထင်တယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့အနှစ် ၃၀ ကငါအလှအပကျောင်းတက်တုန်းကငါဒီကတ်ကြေးအကြောင်းငါတစ်ခါမှမလေ့လာဖူးတာရယ်စရာဘဲ။ အဲဒါကငါ့နေရာကျသွားတယ်၊ ဒါမှမဟုတ်သူတို့ကခုထိနာမည်ကြီးတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာငါသေချာမသိဘူး။ ငါမကြာသေးမီကငါဤအရာနှင့်အခြားအမျိုးအစား ၂ မျိုးကိုသုံးနေသောလူငယ်တစ် ဦး ကဆံပင်ညှပ်ခဲ့သည်။ သူလည်းအရမ်းကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ခဲ့တယ်။ ငါသူတို့ကိုယ်သူတို့ဘယ်လိုသုံးရတယ်ဆိုတာကိုလေ့လာချင်တဲ့အတွက်ငါသူတို့ကိုသုတေသနလုပ်နေတာ။ သတင်းအချက်အလက်အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။
အလှကုန်ဗေဒင်ကျောင်းများမှဆံပင်ပါးသူများကိုဆံပင်ပါးစေသည့်ကတ်ကြေးအသုံးပြုနည်းကိုသင်ပေးလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်မျှော်လင့်ပါသည်။ အကယ်၍ သင်သည်ထိုင်ခုံတွင်ထိုင်ပြီးတစ်စုံတစ်ယောက်ကိုကတ်ကြေးနှင့်လှည့်စားနေသည်ကိုသင်တွေ့မြင်ပါကပြေးရန်အချိန်ရောက်လာပြီ။ ဟားဟား။